छाउगोठ महिलालाई जिउँदै गाड्ने एउटा चिहान हो - Ratopati
- | नारायणी अधिकारी
araयहाँ महिलाहरुको वास्तविक अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ । महिलाहरु सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक, आर्थिक रुपमा धेरै पछि धकेलिएका छन् । उनीहरुको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उनीहरुका समस्याको पहिचान नै नगरी केन्द्रबाट उनीहरुकै नाममा योजना, कार्यक्रम बनाइने र त्यस स्थानमा नपुगी बजेट सकिने रहेछ । सुदूरपश्चिमका नाममा खुलेका कुनै पनि सङ्घ–संस्थाहरु उनीहरुका समस्य बुझ्न त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् ।
पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ८, १३, १४ र १५ मा कल्पनै गर्न नसकिने प्रकृतिको छाउपडी प्रथा छ । सुदूरपश्चिमको पाहाडी जिल्लामा यो प्रथा छ भन्ने त मैले सुनेकी थिएँ तर महाकाली अञ्चलको एक मात्र तराई जिल्ला कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा ४८ वर्षभन्दा पहिलादेखि चलिआएको छाउगोठको चलन किन समाप्त हुन सकेन ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यसका जवाफहरु अहिलेसम्म किन खोजिएन ? अब यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
पुनर्वास नगरपालिका मात्रै हैन, समग्र सुदूरको बदनाम र कलङ्क हो छाउपडी प्रथा । बझाङ, बजुरा, अछामलगायतका पाहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरी आएका समुदायमा यो प्रथा रहेको छ । महिलाहरु महिनावारी र सुत्केरी भएको बेला घरबाट अलग्गै बस्न मूल घरबाट निकै टाढा सानो ३ फिट चौडाइ र ४/५ फिट लम्बाइ भएको एउटा साँघुरो खोर (गोठ) बनाइन्छ । त्यो पनि काठपात भएकाहरुले नत्र ४ वटा खुट्टा गाडेर माथि सेउलाले छाएको हुन्छ । कतैकतै चाहिँ वस्तुभाउसँगै खुला गोठमा एउटा खटिया राखिएको हुँदो रहेछ ।
तराईका अन्य क्षेत्रमा जस्तै पुनर्वासमा शीतलहरको चिसो अति नै कठोर हुने गर्छ । राति यहाँको तापक्रम ७/८ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झर्छ । यो वर्ष मङ्सिरबाटै शीतलहर सुरु भएको छ । बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई झनै मुस्किल भएको छ । कैयौं दिनसम्म घाम लाग्दैन । लुगा हप्ता दिनमा पनि सुक्दैनन् । तर छाउगोठमा प्रयोग हुने कम्बल र तन्ना प्रत्येक दिन धुनै पर्ने बाध्यताकारी नियम छ । नसुके पनि चिसै ओड्नु–आछ्याउनु पर्छ । अत्यधिक चिसोले हाइपोथर्मियाका भई ज्यान जान सक्छ । तर पनि नियममा छुट हुँदैन । पुसमाघको जाडोमा भिजेको कम्बल ओडर महिला दिदीबहिनीहरु रुँदै र काप्दै रात काट्ने गरेका छन् । जाडोमा छाउगोठको ‘बह’ सुनिनसक्नु छ ।
पुनर्वास नगरपालिकाको कार्यालय, कञ्चनपुर